Nhoroondo - Bocas Bali
Chiquita ichiri kutonga chiteshi chengarava paAlmirante muBocas del Toro.
Muna 1502, boka rengarava dzaChristopher Columbus rakakuvadzwa zvikuru mudutu raiva kumhenderekedzo yeCentral America. Vashandi vake vaida kuzorora uye pokugara pagungwa kuti vagadzirise magwa. Pana Gumiguru 6, 1502, akamira pakati peboka rezvitsuwa zvine gungwa reCaribbean Sea. Akagara muBocas del Toro.
Paaigadzira magwa, Christopher Columbus akatumidza zvimwe zvezvitsuwa izvi, zvinosanganisira Isla Colón (Columbus Island), kumusha kuBocas Town, uye pedyo Isla Cristóbal (Christopher Island). Hmm, tinofunga kuti aive nehumwe moyo. Columbus akazonzi ndiye akawana zvitsuwa izvi kunyange zvazvo vanhu veko vakagara ikoko kwezviuru zvemakore.
Panama yaiva chikamu cheumambo hweSpain kwemakore anoda kusvika 300, kubva muna 1538 kusvika muna 1821. Panguva iyi, sirivha yeInca negoridhe zvakatakurwa kubva kuSouth America kuenda kuPanama City, zvichitakurirwa nenyika kudivi reCaribbean, uye zvakaiswa pazvikepe zvepfuma. vakananga kuSpain. Izvi zvakaita kuti Bocas del Toro ive yekuvanda ine musoro yevapambi muma1600 nema1700s. Vapambi ava vaigara vachirwisa makaravhani ehupfumi uye zvikepe zvaienda kuSpain.
Nekukurumidza kumberi kwe200 makore kusvika 1899 apo United Fruit Company, yakazove Chiquita Banana, yakazvimisikidza muBocas Town. Ikozvino, Bocas del Toro ndiyo mbereko yehumambo hweChiquita. Kurima mabhanana kumahombekombe kuchiri kushanda semushandirwi mukuru mudunhu iri, kurima nekutumira kunze kwenyika 750,000 matani emabhanana gore negore.
Bocas Town inobata moyo webasa muboka rezvitsuwa, uko mabhoti epanga ane mavara anoshanda se "mota" uye nzira dzemvura pakati pezvitsuwa dzinoshanda se "migwagwa." MuBocas Town, vafambi vanoona mabhasikoro akawanda kupfuura mota, vachiwedzera runako rwenzvimbo kune ine simba pakati peguta.